Waa maxay Litecoin? Qiimaha, Dulmarka iyo Sida ay u shaqeyso - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Waa maxay Litecoin? Qiimaha, Dulmarka iyo Sida ay u shaqeyso
Isha Sawirka Mint.com
Maqaalkan, waxaan wax badan ku sharxi doonaa Litecoin, sida ay u shaqeyso, sida loo iibsan karo, iyo sidoo kale sida cryptocurrency uga duwan tahay Bitcoin hormuudka ka ah. Marka hore, waa inaan sharaxnaa waxa cryptocurrency macnaheedu yahay maadaama Litecoin uu yahay mid ka mid ah lacagaha ugu sarreeya adduunka maanta.
Hadda, si aad fikrad u hesho waxa saxda ah ee cryptocurrency, waxaan marka hore u baahanahay inaan fahanno sida lacagtu u shaqeyso. Marka hore, aan ku bilowno lacagta jireed, oo ay ku jiraan biilasha iyo qadaadiicda. Ka dib waxaa yimid eMoney, oo sidoo kale loo yaqaan lacagta elektaroonigga ah, taas oo ka muuqata codsiyadayada bangiyada elektaroonigga ah. Labada nooc ee lacag ayaa naloo soo saaray.
Ka dib, cryptocurrency ayaa soo baxday, nooc ka mid ah lacagta elektarooniga ah oo aan bixin dawlad kasta. Waxaan sidoo kale ugu yeernaa "Lacagta Xisaabta" sababtoo ah qaabkan lacagta waxaa lagu horumariyaa laguna maamulaa iyada oo loo marayo blockchain, oo sidoo kale loo yaqaan shabakadaha kombuyuutarka, oo ay ku shaqeeyaan xisaab horumarsan.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waa lacag dijitaal ah oo online-ka ah oo u shaqeysa sidii is-dhaafsiga maaliyadeed ee tooska ah ee u dhexeeya dadka isticmaala iyada oo aan ka qaybgelin dhinacyo saddexaad ama bangiyada, si ka duwan nidaamka lacagta ee aan guud ahaan aad u isticmaalno iyo in bangiga dhexe uu isticmaalo.
Lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo dhowr ah ayaa la baahiyaa, oo ay ku jirto Litecoin. Ujeedada ugu weyn ee qaabkan lacagta ah ayaa ah in la baahiyo nidaamka bangiyada, waxaana ugu wacan dhibka soo wajaha shacabka marka ay wax u dirayaan ama ay ka qaadanayaan lacagaha loo soo mariyo hay’adaha maaliyadda ama dal kale, taasoo korortay sannadihii u dambeeyay.
Iyada oo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay hadda noqdaan xal xiiso leh oo loogu talagalay teknoolojiyadda teknoolojiyadda iyo hay'adaha ku lug leh macaamilka noocan oo kale ah, waa in la tixgeliyo in lacagta 'cryptocurrencies' aan lagu kaydin habka caadiga ah, ie marka la eego xaalad meesha lacagta lagu kaydin lahaa. Diiwaanka xogta wax kala iibsiga waxa lagu kaydiyaa blockchain gudaha akoon bangi.
Waa maxay Litecoin?
Litecoin waa cryptocurrency oo la aasaasay 2011, laba sano ka dib Seeraar, by injineer hore Google oo lagu magacaabo Charlie Lee. Marka la eego suuq-weynaanta, Litecoin waa cryptocurrency-ka sagaalaad ee ugu weyn. Markii hore, waxay ahayd tartan xoogan Bitcoin.
Maaddaama suuqa cryptocurrency uu ka buuxsamay wax-soo-saar cusub sannadihii la soo dhaafay, Litecoin wuxuu noqday mid caan ah. Litecoin had iyo jeer waxaa loo arkaa falcelin ku saabsan Bitcoin.
Markii Lee uu ku dhawaaqay bilawga Litecoin ee madasha caanka ah ee Bitcoin, wuxuu ugu yeedhay "Bitcoin Lite Version" sababtaas awgeed, Litecoin waxay leedahay astaamo badan oo la mid ah Bitcoin halka ay wax ka beddelayso oo ay wax ka beddelayso dhinacyo kale oo kooxda horumarinta aaminsan tahay in la hagaajin karo. .
Sidee loo abuuray Litecoin?
Ilaa 2011, macdanta Bitcoin waxaa inta badan lagu sameeyay GPU-yada, taas oo kor u qaaday walaaca qaar ka mid ah isticmaalayaasha in macdan qodista ay hadda caqabad weyn ku tahay gelitaanka iyo in khayraadka CPU ee loo isticmaalo macdanta ay noqdaan kuwo duugoobay oo aan qiimo lahayn. Iyada oo leh code-ka Bitcoin, lacag cusub oo beddel ah ayaa la sameeyay.
Waxaa loo yaqaan Tenebrix (TBX). Tenebrix waxay ku bedeshay wareegyada SHA256 ee Bitcoin mining algorithm shaqada Scrypt, kaas oo si gaar ah loo sameeyay 2009 si loogu dardargeliyo chips FPGA ama ASIC. Tani waxay u ogolaanaysaa Tenebrix inay noqoto "GPU-u adkaysta" oo ay isticmaasho agabka CPU ee la heli karo ee macdanta Bitcoin.
Tenebrix lafteedu waxay ahayd dabagal hore oo cryptocurrency ah oo bedelay barnaamijka soo saarista Seeraar abaal marin joogto ah (abuurista sahay lacageed oo aan xadidnayn). Si kastaba ha ahaatee, horumariyayaashu waxay ku daraan qodob ku jira koodhka u oggolaanaya inay dalbadaan 7.7 milyan TBX bilaash ah, taas oo ay dhaleeceeyeen isticmaalayaasha.
Si taas loo hagaajiyo, Charlie Lee, oo ah shaqaale Google ah oo markii dambe noqday Agaasimaha Injineerinka ee Coinbase, ayaa abuuray nooc kale oo Tenebrix ah oo la yiraahdo Fairbrix (FBX). Litecoin waxay ka dhaxashaa algorithmamka macdanta Scrypt ee Fairbrix laakiin waxay isticmaashaa lacagta Seeraar ee xadidan oo ay la socoto isbeddelo kale.
Lee wuxuu Litecoin ku bilaabay macmiil il furan GitHub Oktoobar 7, 2011. Shabakadda Litecoin waxay si toos ah u socotay Oktoobar 13, 2011. Waxay ahayd fargeeto koodhka isha ee macmiilka Seeraar Core, kaas oo inta badan lagu sifeeyay hoos u dhac ku yimid jiilka block. (2.5 daqiiqo), tirada ugu badan ee lacagta qadaadiicda ah, algorithmthamka hashing ka duwan (scrypt, halkii SHA256), iyo GUI wax yar la beddelay.
Bishii Noofambar 2013, qiimaha korodhka ee Litecoin wuxuu arkay kobac ballaaran oo ay ku jirto boodbood 100% 24 saacadood gudahood. Bishii Maajo 2017, Litecoin wuxuu noqday kii ugu horreeyay ee 5 cryptocurrencies (iyadoo la adeegsanayo suuqa weyn) si loo soo bandhigo Markhaati Kala soocida.
Ka dib, bishii Maajo ee sanadkaas, macaamilkii ugu horreeyay ee Shabakadda Hillaaca waxaa lagu dhameeyay Litecoin, taasoo 0.00000001 LTC ka soo Zurich uga soo wareejisay San Francisco in ka yar hal ilbiriqsi.
Bishii Sebtembar 2021, war-saxaafadeed been abuur ah ayaa lagu dhejiyay GlobeNewswire oo ku dhawaaqayay iskaashi ka dhexeeya Litecoin iyo Walmart. Tani waxay keentay in qiimaha Litecoin uu kor u kaco ilaa 30% ka hor inta aan war-saxaafadeedka laga soo saarin been abuur.
Farqiga u dhexeeya Litecoin iyo Bitcoin
Litecoin wuxuu kaga duwan yahay Bitcoin dhowr siyaabood:
Shabakadda Litecoin waxa ay rabta in ay habayso block 2.5 daqiiqo kasta halkii ay ka isticmaali lahayd Bitcoin 10ka daqiiqo. Tani waxay u oggolaanaysaa Litecoin inay xaqiijiso wax kala iibsiga si ka dhaqso badan Bitcoin.
Litecoin waxay isticmaashaa scrypt algorithm-keeda tijaabada ah, shaqada xusuusta ee isku xigta oo si asymptotic ah u baahan xasuus ka badan algorithm-ka aan lahayn wax xasuus ah. Isticmaalka Litecoin ee Scrypt algorithm awgeed, FPGA iyo qalabka ASIC ee lagu sameeyay miinada Litecoin ayaa aad u adag in la dhiso oo ka qaalisan soo saarista Bitcoin, taas oo adeegsata SHA256.
Marka ay timaado Litecoin sida habka lacag-bixinta, maalmihii hore, waxaa jiray xiriir la leh Bitcoin marka loo eego qaababka lacag bixinta ee la ballaariyay.
In kasta oo qaababka lacag-bixinta Litecoin loo malayn karo inay la jaanqaadi karaan Seeraar, haddana waxaa la ogaaday in xidhiidh yar uu ka dhexeeyo Litecoin iyo hababka lacag bixinta Bitcoin maanta, qaababkanina way sii kala duwanaanayaan muddo ka dib.
Sidee buu Litecoin u shaqeeyaa?
Litecoin waxay ku lug leedahay abuurista iyo gudbinta lacagaha dhijitaalka ah iyadoo la adeegsanayo hab-maamuuska qarsoodiga ah ee il furan. Waxay isticmaashaa tignoolajiyada blockchain si ay u diiwaan geliso xisaabaadka dadweynaha ee baahsanaanta dhammaan wax kala iibsiga.
Waa maxay blockchain? Blockchain-ku wuxuu raadraacaa dhammaan wax kala iibsiga Litecoin. Wax kala iibsiga cryptocurrency ee hadda jira ayaa loo qaybiyaa "blocks" macdan qodayaasha. Blocks si qarsoodi ah ayaa loo xafiday ka hor inta aan lagu xidhin blockchain jira. Tiknoolajiyada Blockchain waxaa si la mid ah loo isticmaalaa lacagaha crypto kala duwan, oo ay ku jiraan Litecoin iyo Bitcoin.
Macdanta, dhanka kale, waa habka lagu dhejiyo baloog kasta blockchain jira iyadoo la isticmaalayo software macdanta. Marka block la xaqiijiyo, cutubyo cusub oo cryptocurrency ah ayaa la bilaabay, macdan qodayaashuna waxay si toos ah u keeni karaan cutubyadan suuqa.
Sida loo ganacsado Litecoin
Marka aad ku iibsato Litecoin sarrifka, qiimaha Litecoin waxaa inta badan laga soo xigtay marka loo eego dollarka Maraykanka (USD), taasoo la macno ah inaad iibinayso USD si aad u iibsato Litecoin. Haddii qiimuhu kordho, waxaad ku iibin kartaa faa'iido sababtoo ah hadda waxay ka qiimo badan tahay USD marka loo eego markaad iibsanaysay.
Haddii qiimuhu hoos u dhaco oo aad go'aansato inaad iibiso, waxaad samaynaysaa khasaare. Waxaad ku ganacsan kartaa Litecoin adiga oo isticmaalaya sharad ama qandaraas kala duwanaansho (CFD). Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku qiyaasto dhaqdhaqaaqooda qiimaha adigoon haysan cryptocurrency dhabta ah.
Ma qaadanaysid lahaanshaha Litecoin. Taa baddalkeeda, waxaad fureysaa boos kor u kici doona ama hoos ugu kici doona qiimaha iyadoo ku xiran qiimaha Litecoin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay oo kaliya inaad dhigato boqolkiiba wadarta qiimaha ganacsiga si aad boos u furto - uma baahnid inaad wada xidho dhammaan raasamaalkaaga hal mar adigoo si toos ah u iibsanaya Litecoin, laakiin waxaad isticmaali kartaa deebaaji bilowga ah si aad u hesho bandhig. xaddi badan. Iyadoo ganacsiga leveraged uu kordhin karo soo celintaada, khasaaruhu sidoo kale wuu kordhiyaa maadaama ay ku saleysan yihiin wadarta qiimaha booska.
Waa maxay arrimaha saameeya qiimaha Litecoin?
Isbeddelka Litecoin waxa ay u badan tahay in ay horseedaan arrimo la mid ah sida Bitcoin, tusaale ahaan:
Xeerarkii: Cryptocurrencies hadda maaha kuwo ay xukumaan dawladaha iyo bangiyada dhexe. Su'aashu waxay soo baxaysaa sida tani isu bedeli karto dhowrka sano ee soo socda iyo saamaynta ay tani ku yeelan karto qiimaha bixinta
Supply: Waxaa jira tiro xadidan oo Litecoins ah oo la macdan karo (84 milyan). Helitaanka sidoo kale wuu isbedbeddeli karaa iyadoo ku xiran xawaaraha ay lacagaha ku soo galaan suuqa.
Press: Qiimaha Litecoin waxaa saameyn ku yeelan kara aragtida dadweynaha, amniga, cimri dhererka, iyo qiimaha lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida Bitcoin.
Aqoonsi: Shirkadaha ama macaamiishu hadda ma aysan qaadan Litecoin sida habka lacag bixinta, laakiin qaar ayaa u arka suurtagalnimada tignoolajiyada blockchain waxaanan u maleyneynaa inay noqon karto mid baahsan mustaqbalka.
Litecoin hadda ma maalgashi wanaagsan baa?
Qiimaynta joogtada ah ee 15ka ugu sarreeya ee cryptocurrencies ee suuqgeynta suuqa ayaa ka dhigaysa Litecoin mid deggan marka loo eego altcoin-yada kale ee la abuuray isla waqti isku mid ah.
Korsashada baaxadda weyn waxay si lama huraan ah u kordhin doontaa qiimaha, taas oo aan aragnay beryahan dambe, iyada oo la tixraacayo in Litecoin ay kor u kacday qiimo ka badan Bitcoin boqolkiiba ilaa bishii Maajo ee la soo dhaafay.
Haddii aad xiisaynayso inaad maal-gashato tignoolajiyada awood u siinaya dhaq-dhaqaaqyo xad dhaaf ah oo jaban, Litecoin waa fursad maalgashi oo weyn. Intaa waxaa dheer, awood u yeelashada iyo xasilloonida Litecoin waxay ka dhigaysaa ikhtiyaar weyn kuwa raadinaya inay ku qoyaan cryptocurrencies kale.
Marka la barbardhigo, halka Litecoin ay hadda wax ku kala iibsanayso wax ka yar $ 200, qiimaha hal bitcoin ayaa ka sarreeya $ 36,000. Si kastaba ha noqotee, kuwa kale ayaa rajo yar ka qaba altcoin. Dhaleeceeyayaasha qaarkood waxay ku qiyaasaan in halka Litecoin ay noqon karto ganacsi mala-awaal ah, maahan maalgashi wanaagsan.
Doodooda waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah in horumarinta iyo injineerada Litecoin aysan ahayn kuwo adag. Sidoo kale ma jiraan kiisas wanaagsan oo maalgashadayaasha ay si caqli gal ah u isticmaalaan.
Ku darso dhibaatada in abuuraha Litecoin uu iibiyay dhammaan, laakiin qayb ka mid ah qadaadiicdooda si ay u haystaan ​​​​wax la ururiyo - calaamad su'aal leh. Inkasta oo aysan jirin saldhig maalgashi oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay Litecoin, waxay noqon kartaa ganacsi wanaagsan qof aan dan ka lahayn arrimahan oo kaliya fiiri dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Waa imisa qiimaha Litecoin?
Litecoin waxaa loo qorsheeyay in ay soo saarto qaddar xaddidan (84 milyan) oo ah cryptocurrency-keeda LTC oo ay si joogto ah u dhimayso qaddarka LTC cusub ee ay ku soo kordhiso dhaqaalaheeda.
Litecoin waxay caan ku tahay ganacsatada ku tiirsan inay wax ku kordhiyaan qiimaha saadka oo hoos u dhacay iyo la socodka kobaca Bitcoin ee waqtiyada qiimaha kor u kaca, sidoo kale Litecoin waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo badeecadaha iyo adeegyada soo-saareyaal lacag-bixineed oo Bitcoins iyo kuwa kale ay aqbalaan.
Waxa kale oo lagu kala iibsadaa inta badan isweydaarsiga cryptocurrency ee waaweyn (ay ku jirto Kraken!), taasoo ka dhigaysa suuqa mid ka mid ah dareeraha ugu badan adduunka.
Litecoin waa mid ka mid ah lacagaha ugu da'da weyn ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' sidaas darteed si fiican ayaa loo aasaasay booska hantida dhijitaalka ah. In kasta oo ay ka yar tahay iftiinka suuqa ee 2021, xaqiiqda ah in ay ka badbaaday shilkii 2018 oo ay dib u soo celisay qiimihiisii ​​ilaa heerkii ugu sarreeyay waxay u egtahay inay ku sii jiri doonto warshadaha wakhti dheer oo soo socda.
Haddii aasaasihii Charlie Lee qorshayaashii dhawaa, oo ay ku jiraan hammigiisa ku saabsan fungibility calaamo, yimaado miro, Litecoin weli noqon kartaa xiiso. Laakiin, sida habka Bitcoin u shaqeyso, mashruucu waa inuu si joogto ah u cusbooneysiiyaa si uu ugu noolaado nidaamka deegaankan tartanka sii kordhaya.
Mashruucyada 2021 waxay bixiyaan sifooyin horumarsan iyo faa'iidooyin kuwa haysta calaamadaha marka loo eego Litecoin. Mashruucu wuxuu u dagaalamaa hal-abuurka iyo mustaqbalka hantida dhijitaalka ah waxay u muuqdaan inay ku yaalaan blockchains ee qandaraasyada smart.
Qiimaha Litecoin waxaa hubaal ah oo kaliya oo lagu taageeray mala-awaal, markaa maaha mid ka mid ah kaydka aan ku talineyno in la kala hormariyo dhammaadka hoose ee faylalka.
Sida loo iibsado Litecoin kaarka deynta
10ka Shirkadda Sarrifka Lacagta Cryptocurrency ee ugu Wanaagsan Nigeria
10ka sawirqaade ee ugu mushaarka badan
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' waxay jirtay in ka badan toban sano hadda laga bilaabo hordhaca Bitcoin. Si kastaba ha ahaatee, dadku waxay ahaayeen…
Waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso waa maxay qadaadiic tartan? Hagaag, qadaadiic tartanku waa lacag la…
Dib u eegista Coinbase 2021 | Coinbase Ammaan ma yahay?
Ka dib markii la bilaabay cryptocurrency-gii ugu horreeyay ee Seeraar, wuxuu helay hantida dadka, oo uu helay caan, hanti kale oo dhijitaal ah ayaa la abuuray.
Waa maxay Lacagta caddaynta? Maxay Matalaysaa?
Weligaa ma maqashay qadaadiicda caddaynta? Oo ma waxaad rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin qadaadiicda caddaynta? Waa maxay...
Tobankii sano ee la soo dhaafay, bitcoin waxa ay dhalisey waali wadareed. Way adag tahay in la sheego in cryptocurrency-kan uu noqon doono…